Posted By : paprd_editor, Date : 08.11.20210comment
နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့်မြေကွက် စုစုပေါင်း (၂၃)ခုကို (၈-၃-၂၀၂၀)၊(၂၆-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့များ၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် လည်းကောင်း၊ (၉-၃-၂၀၂၀)၊(၂၇-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့များ၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် လည်းကောင်း၊ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချရန်အတွက် ကြော်ငြာခဲ့ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်နှုန်းမြင့်တက်လာမှု အခြေအနေအရ (၅-၄-၂၀၂၀)၊ (၁၇-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့များ၌ ထုတ်ဝေ ခဲ့သည့်ကြေးမုံသတင်းစာနှင့် (၁၈-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ မြေနှင့်အဆောက်အဦ နှင့် မြေကွက် (၂၃)ခုကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ယခင်အဆိုပြုလွှာဝယ်ယူခဲ့သူများနှင့် ထပ်မံဝယ်ယူလိုသူများမှ ဝယ်ယူလိုသော Lot No. တစ်ခုချင်းအလိုက် သီးခြားအဆိုပြုလွှာ တစ်စောင်စီ တင်သွင်းရမည်၊ သတ်မှတ်စပေါ်ငွေ P.O Cheque (Payment Order Cheque)အား တင်ဒါတင်သွင်းလွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ
စပေါ်ငွေသွင်းရမည့် တန်ဖိုးကို အဆိုပြုလွှာဝယ်ယူသည့် အခါတစ်ပါတည်း ဖော်ပြပေးပါမည်။
၃၀-၁၁-၂၀၂၁၊ ၁-၁၂-၂၀၂၁၊ ၂-၁၂-၂၀၂၁
Lot No. (၁) မှ (၂၃) အထိ နံနက်(၁၀)နာရီမှစ၍ အစဉ်လိုက် လက်ခံပါမည်။
၆။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၀၆၃၃၉၊ ၀၆၇-၄၀၆၁၃၃ တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦ နှင့် မြေကွက် (၂၃)ခု မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပြီး Lot No အလိုက် ဓါတ်ပုံများအား ဤနေရာတွင် Click ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်-
မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့် မြေကွက် (အကျယ်အဝန်း)
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်(၂)၊ ဆိပ်မူကျေးရွာ၊ အမှတ် (၁၅၉)၊ ကွင်းအမှတ် (Oss-၉၆)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၀၅၃)ဧက
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးဝမြို့၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ရှိ မြေနှင့်အဆောက် အဦ၊ မြေ(၁.၂၁၃)ဧက
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၇)၊ အောင်သိဒ္ဓိလမ်း နှင့် ဧကရာဇ်လမ်းထောင့်၊ အကွက်အမှတ်(၇၂)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၀၆၉)ဧက
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်၊ တောင်ဇလပ်ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၈)၊ ကွင်းအမှတ် (၈၄၆)၊ အိမ်အမှတ်(၄၄)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၀၉၁)ဧက
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့၊ သီရိမြိုင်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၄)၊ အမှတ် (၁၁၄)ရှိ သစ်စက်မြေနှင့် အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၂၅)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၃၁)နှင့် (၁၃၂)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၁.၀၇၉)ဧက
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၈)၊ မြေတိုင်း(၂၃/အေ)၊ မြေကွက်အမှတ် (၁၃၄၂-၁၃၄၃)ရှိ မြေကွက်၊ မြေ(၀.၃၆၈)ဧက
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၈)၊ မြေတိုင်း(၂၃/အေ)၊ မြေကွက်အမှတ် (၁၃၄၆-၁၃၄၇)ရှိ မြေကွက်၊ မြေ(၀.၃၆၈)ဧက
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၈)၊ မြေတိုင်း(၂၃/အေ)၊ မြေကွက်အမှတ်(သီးသန့်-၁)ရှိ မြေကွက်၊ မြေ(၀.၃၆)ဧက
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မန္တလေးရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၃၆)၊ စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် အမှတ်(၀၈၆၀)နှင့်ကပ်လျက် မြေကွက်(B)နှင့်မြေကွက်(C)ရှိ မြေနှင့် အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၅၆၆)ဧက
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ရန်မျိုးအောင်ရပ်ကွက်၊ မေခလမ်း၊ အမှတ်(၂၆)ရှိ မြေနှင့်အဆောက် အဦ၊ မြေ(၀.၀၄၁)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ မုံးကိုးမြို့နယ်ခွဲ၊ ကွင်းအမှတ်(၂၁၄)၊ အိမ်အမှတ်(၁၂၆)၊ မြို့မ ရပ်ကွက်(၂)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၀၆၉)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ လွန်းကျိုင်းကျေးရွာ၊ ကွင်းအမှတ်(၂၃)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၁၉၈)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၆၂/က)၊ တရုတ် ဘုရားကျောင်း၊ ရေကန်လမ်းနှင့် (၄၂)လမ်းထောင့်၊ နယ်မြေ(၁၃)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၀၄၅)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့၊ သံလွင်ကျေးရွာ၊ အကွက်အမှတ်-ကွင်းပြင်၊ ရပ်ကွက်(၈)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၃၈၅)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဆန်ဆိုင်း(က)ရပ်ကွက်၊ ခတ္တာလမ်းမနှင့် ခတ္တာ(၂)လမ်းထောင့်၊ အိမ်အမှတ်(၄/၅၆)၊ အကွက်အမှတ်(၁၆)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၂၄၈)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ လွန်းကျိုင်းကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၂၃)၊ အမှတ်(၂၄၁)၊ အခါဈေးနောက် (ဝိန်းကျောက်ရွာ) ယခင်ဟောင်လိတ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၀၇၄)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက်ရွာ၊ (ယခင် ဟောင်လိတ်ကျေးရွာအုပ်စု)၊ လွန်းကျိုင်းကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၂၃)၊ (အခါဈေးနောက်)၊ အိမ်အမှတ်(ဝတ(ခ)/၂၁၅)ရှိ မြေနှင့် အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၂၁)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ လွန်းကျိုင်းကျေးရွာ၊ ကွင်းအမှတ်(၂၃)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၅၈၁)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဆန်ဆိုင်း(က)ရပ်ကွက်၊ ခွာညိုလမ်း၊ အမှတ်(၅/၂၃)(က)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၀၆၀)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဆန်ဆိုင်း(က)ရပ်ကွက်၊ ခတ္တာလမ်း၊ အမှတ်(၄/၈၇)(က)ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ မြေ(၀.၀၈၈)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ အကွက်အမှတ် (မန်အိုင်အရှေ့ကွင်း)၊ နယ်မြေ(၁၃)ရှိ မြေကွက်၊ မြေ(၀.၀၉၂)ဧက
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ အကွက်အမှတ် (မန်အိုင်အရှေ့ တိုးချဲ့ကွင်း)၊ နယ်မြေ(၁၃)ရှိ မြေကွက်၊ မြေ(၀.၀၈၂)ဧက
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ သင်္ဘောကျင်းရပ်ရှိ မြေနှင့် သိုလှောင်ရုံ(၆)လုံး၊ မြေ(၆.၈၉၇)ဧက